Ubisi lweAlmond, yintoni, izibonelelo kunye neresiphi? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngokunyuka kokutya okusekwe kwizityalo kunye novakalelo kwiimveliso zobisi, abantu abaninzi bafuna enye indlela kubisi lwenkomo, njengobisi lweamangile.
1 Yintoni ubisi lweamangile?
2 Ixabiso lesondlo
3 Izibonelelo zobisi lweAlmond
3.1 Ucebile kwi-vitamin E
3.2 Ihlwempu kwiswekile
4.1 I-protein engalunganga
4.2 Ayifanelekanga kubantwana
4.3 Inokuba nezongezelelo
5 Iresiphi yobisi yealmond eyenziweyo
Yintoni ubisi lweamangile?
Ubisi lweAlmond yenye yezona zisetyiwa kakhulu zemifuno yemifuno ngenxa yokuthungwa okutyebileyo kunye nencasa.
Esi siselo sisekwe kwizityalo senziwe ngomxube weamangile kunye namanzi, kodwa sinokubandakanya ezinye izinto ngokuxhomekeke kuhlobo Uninzi lwabantu luyithenga yenziwe kwangaphambili, nangona kulula ukuyenza ekhaya.
Ngexesha lokulungiswa, iiamangile kunye namanzi ziyaxutywa kunye kunye nomgubo uyasuswa, kukhokelela kulwelo olugudileyo.
Kwezona mveliso zininzi ze-almond, i-thickeners, i-preservatives kunye neencasa ziyongezwa ukuphucula incasa, ubume kunye nobomi beshelfu.
Ngokwendalo ayinamveliso yobisi, oko kuthetha ukuba ilungele iivegans, kunye nezo zineempawu zobisi okanye ukunganyamezelani kwe-lactose.
Okwangoku, kuya kufuneka uyiphephe xa uxabisa imbewu yeoyile.
Kwiikhalori ezingama-39 ngekomityi nganye (240 ml), ubisi lweamangile lusezantsi kakhulu xa kuthelekiswa nobisi oluqhelekileyo nezinye iziselo ezisekwe kwizityalo. Iqulethe izondlo ezininzi:
Amafutha: 3 gram
Iiprotheni: 1 gram
IiCarbohydrate: 3,5 gram
Ifayibha: 0.5 iigrem
I-calcium: 24% yeXabiso lemihla ngemihla (DV)
Potassium: 4% RV
Vitamin D: 18% yeRV
Vitamin E: 110% yeRV
Ezinye iintlobo ziqiniswe ngecalcium kunye novithamini D, ezizezona zibalulekileyo kwizondlo zempilo yethambo.
Izibonelelo zobisi lweAlmond
Ucebile kwi-vitamin E
Iiamangile ngumthombo ogqwesileyo wevithamini E, nto leyo ibalulekile ivithamin enyibilikayo enamafutha ukukhusela iiseli zakho kumonakalo omkhulu wasimahla.
I-Vitamin E ikhuthaza amehlo kunye nolusu olusempilweni, kwaye inokudlala indima ekukhuseleni kwisifo sentliziyo.
Iglasi enye (i-240 ml) yobisi lweamangile ibonelela nge-110% yesondlo esinconywayo se-vitamin E yemihla ngemihla, isenza ukuba kube lula kwaye kufikeleleke ngendlela yokuhlangabezana neemfuno zakho.
Uninzi lwabantu lutya iswekile eninzi ngohlobo lweedessert, iziselo kunye nezinto ezinencasa. Ke ngoko, ukukhetha ukutya ngokwemvelo okuneswekile kunokunceda ukulawula ubunzima kunye nokunciphisa umngcipheko wezifo ezingapheliyo.
Nangona kunjalo, uninzi lweebisi ezingezizo zobisi zinencasa kwaye zinencasa. Ngapha koko, ikomityi e-1 (240 ml) yetshokholethi enobisi lwealmond, umzekelo, inokuba ngaphezulu kwe-21 yeegramu zeswekile eyongeziweyo-5 tsp.
Ukuba uzama ukunciphisa ukutya kwakho iswekile, ubisi lweamangile olungenaswekile lukhetho olukhulu.
Ubisi lweAlmond lubonelela nge-1 gram yeeprotheyini kwikomityi nganye (i-240 ml), ngelixa ubisi lwenkomo kunye nobisi lwe-soy zibonelela nge-8 kunye ne-7 gram ngokwahlukeneyo.
Iprotein ibalulekile kwimisebenzi emininzi yomzimba, kubandakanya ukukhula kwemisipha, ulusu kunye nolwakhiwo lwamathambo, kunye nokuveliswa kwee-enzymes kunye neehomoni.
Ngaphandle kobisi lwe-soy, iziselo ezinamayeza ngokwemvelo ziphantsi kwiprotein, amanqatha, iikhalori, kunye neevithamini ezininzi kunye neeminerals ezifana nentsimbi, ivithamin D kunye necalcium. Ezi zondlo zibalulekile ekukhuleni nasekukhuleni.
Ubisi lweAlmond lubonelela kuphela ngeekhalori ezingama-39, iigrama ezi-3 zamafutha, kunye ne-1 gram yeprotini ngekomityi nganye (240 ml). Oku akwanelanga kumntwana okhulayo.
Ubisi oluqhubekileyo lunokuba nezongezelelo ezininzi, ezinje ngeswekile, ityuwa, iintsini, incasa, kunye ne-lecithin kunye ne-carrageenan (iintlobo zeemulsifiers ezisetyenziselwa ukuthungwa kunye nokungaguquguquki).
Ukongeza, kukho iinguqulelo ezineswekile eninzi, ezinokunyusa umngcipheko wokufumana ubunzima, ukubola kwamazinyo, kunye nezinye iimeko ezingapheliyo.
Iresiphi yobisi yealmond eyenziweyo
Ukwenza ubisi lwakho lwe-almond, landela le recipe elula:
Iikomityi ezi-2 (280 gram) zeeamangile
Iikomityi ezine (4 litre) zamanzi
1 ithisipuni (5 ml) ivanilla ekhutshwe (ngokuzithandela)
Gcoba ii-almond emanzini ubusuku bonke kwaye uhlambe amanzi ngaphambi kokusebenzisa. Yongeza ii-almonds, amanzi kunye ne-vanilla kwi-blender kunye ne-pulse imizuzu engama-1-2 de kube amanzi abe namafu kunye nee-almond zihamba kakuhle.
Phalaza umxube kwisihlunu se-mesh esibekwe ngaphezulu kwesikhongozeli kwaye sigutyungelwe nge-cheesecloth.
Qiniseka ukuba ucinezela ukukhupha ulwelo oluninzi kangangoko. Kuya kufuneka ufumane malunga neekomityi ezi-4 (ilitha enye) yobisi lweamangile.
Beka ulwelo kwisitya esikhonzayo kwaye ugcine kwifriji kangangeentsuku ezingama-4-5.